Njengomthetho, emva komshado abashadayo ukunikeza nomunye isithembiso sokuthi kuyoba ngendlela enkulu ukugubha iminyaka engu-kosuku imilingo kakhulu ngamunye lapho beba nomfazi. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi, injabulo buphela, njalo eduze ngosuku lomshado kancane dimmer odlule. akukho isifiso eminyakeni eyishumi akekho ukumema ezongivakashela, umkakhe ayisethelwe esikhathini esidlule, evutha udaba "yini ukupheka lomshado." Kodwa lokhu kubi! Vuka! Minyaka yonke omusha, bahlala ndawonye - iholide yangempela, ngoba uma uhlala ndawonye iminyaka engu-25 ngemuva, ngakho kuningi ukugubha futhi ukhumbule ukuthi ingilazi nabangani. engu-25 - a term sina imibhangqwana yesimanje, futhi hhayi nje iminyaka engu-, kuba - umshado esiliva.
Excellent, gubha! Ngakho-ke konke okufanayo ukupheka? Kuzoba ongokomfanekiso kakhulu ukupheka kahle ukuthi kwaba etafuleni lakho futhi izivakashi zakho ukuba usuku lomshado, uma ziye zaya yokudlela ukugubha. "Olivier" sasilapho bendabuko? Yini iholidi ngaphandle kwalo! Sandwich nge izinhlanzi obomvu - sicela izivakashi uyokwaneliswa. Khumbula, ukuthi wayeneminyaka engu-25 edlule - ifulegi ezandleni zakho. Xhuma umcabango, kungenzeka kakhulu yokuthuthukisa noma yiliphi isidlo, kokunezela kulo isithako ezithakazelisayo.
Izipho for umshado esiliva umngane wakhe? On the lomshado esiliva - silverware! Ungakwazi banikele womshado ezinye ubucwebe ezenziwe esiliva. Lokhu kungaba indandatho, namacici kwabesifazane, cufflinks, ubophele isiqeshana - kwabesilisa. Kodwa asichubekiseleni kude ukucabanga stereotypical futhi sizame 'poraskinut ubuchopho. " Ngenhlanhla, ngokoqobo yethu kusivumela ukuthi liqalise imibono ezenzeka kuphela ekhanda. Ngokwesibonelo, ngeke ukwazi ukunikeza imigexo isiliva Uhlaka photo, isibonelo, noma umfanekiso amaphuphu amabili ukuqabulana. Imikhiqizo kumele Yebo kwenziwe ngesiliva. Konke kuncike emcabangweni wakho kanye nenani imali yamaphepha isikhwama, ngokulandelana. Yiba yokuqala! 25th wedding yokugubha usuku kwenzeka kuphela kanye empilweni.
Yini ukunikeza umshado esiliva, lapho uya ukuvakashela "abantu abasanda kushada"? Yiqiniso, kumelwe kube isipho double, ukuthi yakhelwe bobabili indoda nenkosikazi. Ukuze amnike uthayi eceleni, futhi yena - ingubo ukotini, ake zihlanganisa fantasy futhi. Namuhla ziningi izinto ngakho izipho wokuqala. Ngokwesibonelo, kungase kwenze kube portrait enkulu ilunga. Nawe - ukuthola okuhle izithombe studio izinga.
Namuhla, umbhangqwana igubha emshadweni wabo esiliva, cishe oneminyaka engaphansi kwengu-45, ngakho-ke abakwazi ukunikeza i-albhamu enhle, ngoba abantu lapho leso sizukulwane ayengenayo umkhuba wokwenza kwesigidi izithombe futhi uwugcine kwi esikhiphekayo idrayivu kanzima. Laba bantu namanje izithombe ezikhethwe ngokucophelela, ubheke cindezela bese ngokucophelela ukugcwalisa ama-albhamu wesithombe bona futhi "ukukhombisa abazukulu." Ngakho-ke, i-albhamu obukhulu - kukho olukhulu uma ungazi ukuthi yini ukunikeza emshadweni esiliva.
Nobuhle nokucwala manje zigcwalisa lesi siprofetho ngokunikela Ukukhetha eziningi amathikithi amabili, imibhangqwana. Umbhangqwana esiliva yethu - impela umbhangqwana uthando! Ngakho-ke, ungase ukuthenga kahle isigqebhezana okwesikhathi okuhle esimisweni double ushokoledi massage noma uhambo ngehhashi. Zikhona ongakhetha - lonke ulwandle. Kuyinto enhle ukuthi namuhla akudingeki ukuba sikhathazeke ngokuthi ekhethekile lomshado isipho kubangani.
Khumbula ukuthi zonke izipho incike ngokuphelele iso lakho lengqondo futhi sengqondo ngabantu ukuthi uyangena ukwenza isipho nice. Ngakho-ke, ezibuza "yini ukunikeza emshadweni esiliva", vele uvule umcabango ubuthe wonke ulwazi ekhanda lakho ngalaba bantu, ukukhumbula izintandokazi zabo kanye nezintshisekelo ... go!
Diamond lomshado - bangaki kweminyaka ethile beshadile?
Sekusetshenziswa ethangini. Uhlolojikelele kanye nencazelo imidlalo